I-China enokuphinda isetyenziselwe ukuphakama njengepakethi mveliso kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Phinda ubuyisele isingxobo sakho, yeyona nto ibhetyebhetye iguquguqukayo kunye nohlobo, evumela abathengi ukuba benze imilo kunye nobukhulu ngokokucaciswa kwabo. Zizinto ezintle zokukhetha kwimveliso eyomileyo kunye nolwelo. Singaseta ngokulula iwindow yeemveliso ukuphucula impembelelo ebonakalayo kwishelufa yevenkile. Indawo emi emazantsi ithe nkqo xa izele ziimveliso. Umphezulu wengxowa ukhuselekile ngokunqunyulwa kokukrazuka kunye ne-zipper enokuphinda ifumaneke. Ukwandisa ubuhlobo bomsebenzisi, Umgca we-laser unokongeza kwi-zipper .Kunye ne-9 + 1 yokuprinta umbala ngombala, ibhegi inomgangatho ophezulu kunye nefuthe elifanelekileyo lokushicilela
Yimani iiphakeji zethu ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze zivela kuyilo ezimbini ezahlukeneyo, itywina le-K-seal ezantsi kunye nengxowa yezantsi ejikelezayo.
I-K-seal engezantsi, ukutywina kumacala omabini kuphakama ngokulula kwi-angle ye-30 degrees ukunciphisa uxinzelelo kwicala lengxowa. Ilungele iimpahla ezinzima;
Ezantsi ezijikeleziweyo zi-welding ecaleni, ziqinisekisa inkangeleko entle yengxowa yonke. Ilungele iimpahla ezilula.
Zombini zibonelela ngeepropathi zomqobo eziphezulu zokugcina imixholo intsha.
Yenza indawo yokuxhoma kwintengiso.
Iintlobo ngeentlobo kunye nezipeki kunye nokufakwa ziyafumaneka, ii-spout zivumela ukugalelwa ngokulula kweemveliso ezomileyo kunye nolwelo.
Iibhegi zokumisa ezenziwe ngaphambili
Kufakwe i-gusset okanye ikhuba elingaphantsi
Pouches Custom ezimile ezikhoyo
Izinto ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze ziyafumaneka ukulungiselela abathengi
Umqobo wokukhetha umqobo ubonelela ngesithintelo sokufuma esifanelekileyo
Umqobo ophakamileyo okhethiweyo unikezela ioksijini esemagqabini kunye nokuthintela ukufuma
Ukuprintwa komhlaba kunye ne-varnish yokhuselo engaphezulu
Ifumaneka ngefestile ecacileyo
Egqithileyo Iingxowa ezinokuphinda zenziwe ngokutsha zeGusset
Okulandelayo: Iipakethi ezi-3 zecala lokutywina kunye neeplastiki zokucoca / iPlastiki yePlastiki / Ingxowa yePlastiki yokutya
Yima up yakutya / Zip Lock Plastic Bag / Yima Po Po ...
Flat ezantsi pouches / Plastic Packaging Ukutya / Zip ...